Nems au boeuf: fomba fikarakarana azy - Nahandro tsotra Malagasy
par Gaël RAKOTOVAO	 28 juin 2015
Toy izao ny fomba fikarakarana nems au boeuf amin ny fomba malagasy.
Isan’ny olona: 5-6
Fotoana ikarakarana azy: 30min
Fotoana iketrehana azy: 20min
Carotte 01 râpée
Ciboulette (tsy voatery)
Pâte fanaovana nem (izay hita eny aminy pavillon Analakely)
Fikarakarana nems au boeuf
Voasana ny ovy, andrahoina atao malemy. Andrahoy koa ny pate blanche.
Andrahoy ny totokena, haroina amin’ny sotro hifangaro tsara tsy hisy hivaingambaingana, avela hangatsiaka.
Afangaroy ny totokena, ny ovy, poireaux, karaoty, ciboulette, pate blanche, ampiana sira.
Alefaso tsikelikely asesika amin’ny pate à nem.
Endasina amin’ny friteuse na vilany saba.
Nems vita malagasy
cuisine malgache recette, recette de cuisine malgache, recette de nems aux legumes, recette des nems au poulet, recette pour faire des nems
Article précédent : Terrine de légumes accompagnée d’une sauce Yaourt
Iles Vanille : Mise en place d’une marque de qualitéArticle suivant :